China Intense Pulse Chiedza Meibomian Gland Kuchengeta Midziyo OPT Kugadzira uye Fekitori | SDK
1. Meibomian gland dysfunction (MGD) ndiyo honzeri huru yeziso rakaoma mune rakaomeswa ziso kupatsanura. Ziso rakaoma rinokanganisa hupenyu hwehupenyu hwemazana emamiriyoni evarwere pasirese.
2. Zviratidzo zveziso rakaoma zvinosanganisira kurwadziwa, kunzwa kwekutsva, kunzwa kwekugadzirisa muviri, ziso dzvuku uye kuona kwakadzima. Parizvino, kurapwa kwemeibomian gland kusagadzikana (MGD) kunonyanya kusanganisira kupisa compress uye meibomian gland massage. Aya maitiro ekurapa dzimwe nguva anokundikana kupa akakosha akasimba ekurapa mhedzisiro.
3. Opt optimized pulsed mwenje zvishoma nezvishoma yakava sarudzo nyowani inoshanda kuvarwere veMGD mumakore achangopfuura, uye varwere ava vanowanzo gamuchira kurapwa uku kana dzimwe nzira dzekurapa dzisingakwanise kupa hutano hwakakwana.
OPT yakagadziridzwa pulsed mwenje inogona kubata matambudziko akakosha eMGD, ayo anogona kuvandudza zvakanyanya kunaka kwenzvimbo yepamusoro, mashandiro ezvigunwe zvemeibomian uye zviratidzo zveziso rakaoma. Iyo michina yeOPT yeMGD (yakaoma ziso) ndeinotevera:
PT OPT inogona kubvisa zvisina kujairika mitsipa yeropa (telangiectasia). Iyi mitsipa yeropa isina kujairika ichaburitsa vapikisi vanopisa. Kana vamiririri vekuputira vakapfuudzwa kumahombekombe e meibomian, zvinokanganisa mashandiro echinyakare ezvigunwe zve meibomian. Nokubvisa kuitisa kwevanomiririra vamiririri, zvakajairika mashandiro ezvipenga zvemeibomian zvichadzorerwa.
Inoonekwa yakaderedzwa ma capillaries pamberi pe OPT kurapwa
Dilated capillaries yakavharwa mushure mekurapwa kweOTI
✦ OPT inogona kupisa iyo meibomian gland kuburikidza nekupisa kuitisa pasi peganda, nokudaro nekuvandudza kuyerera kwemidziyo yemalizi mumatope e meibomian, nokudaro ichivandudza kugadzikana kweiyo kubvarura firimu uye mhando yeiyo ocular pamusoro.
Edu Deredza demodex kuwanda uye yepamusoro eyelid bhakitiriya mutoro kuburikidza neOPT kurapwa, kudzivirira kuunganidzwa kwema eyelid esters, uye kubvisa kumwe kunobva kuzvimba.
Prieto et al, 2002 yakawana kuti mite yakaumbana muganda bvudzi follicles mushure mekurapwa kweIPL
Mune 3-gore rekudzokorodza kudzidza kwaRolando Toyos, iko kurapwa kwekurapa kweOPT kwaive kwakakosha:
1. Mushure mekurapwa, TBUT nguva yakawedzerwa ne4.4 masekondi (ziso rerudyi) uye 4.8 masekondi (ziso rekuruboshwe), mutsauko waive wakakosha; 86% yevarwere makumi manomwe neshanu vakave nekuvandudzwa muTBUT, 9% haina kuchinja kare uye mushure mekurapwa, uye 5% Pakanga pasina varwere vane kuwedzera kweziso rimwe.
2. 90% yevarwere yakavandudzwa muzviratidzo zvitatu (94% yevarwere vakavandudza gland, 98% yevarwere vakavandudza mayero eyelid, uye 93% yevarwere vakagutsikana).
Pashure: Kuvhiya kweziso maikorosikopu SM-1000L
Zvadaro: Portable Vision Screener Cvsx
Yakanyanya Pulse Chiedza Meibomian Gland Kurapa Chishandiso
Meibomian Gland Kurapa Midziyo